Etazonia dia manamafy fa hitohy ny Huawei raha tsy misy ny serivisy Google | Androidsis
Vaovao ratsy ho an'ireo mpampiasa Huawei rehetra izay nametraka ny fanantenany tamin'ny filoham-pirenena amerikana vaovao, Joe Biden, mba hahafahan'ny terminal an'ny mpanamboatra sinoa ityadinoko ny mankafy ny serivisy Google, hatramin'ny nanamafisan'ny Antenimieran'ny varotra any Etazonia ny veto amin'ny Huawei.
Raha ny filazan'i Gina Raimondo, mpitantana azy ambony, tsy misy antony ho an'i Huawei (sy ny orinasa sinoa hafa) hivoaka amin'ny lisitra mainty, ka mandritra izany fotoana izany ireo orinasa amerikana dia mbola tsy afaka manao fifanarahana ara-barotra amin'izy ireo. Ny nofy ratsy izay nanomboka tamin'ny Mey 2019 ho an'i Huawei ary efa nifarana tamin'ny fanovana ny maha filoha azy dia mitohy.
Na dia maro aza ireo niampanga an'i Trump (Repoblikana) tamin'ny veto Huawei, dia nanamafy fotsiny ny fanadihadiana izay natomboky ny fitondrana Obama (Demokraty) taona vitsivitsy lasa izay. Tsy nisy fambara fa ny fanovana ny fiadidian'i Etazonia dia midika fiovana amin'ny fitsaboana azon'i Huawei tao anatin'ny roa taona lasa, ary vao avy nanamafy izany ny fitantanan'i Biden (Demokraty).
Tsy ny HarmonyOS no tokony ho izy
Rehefa nanambara i HarmonyOS i Huawei dia nilaza izy fa rafitra fiasa vaovao, rafitra iray izay tsy hiorina amin'ny android izanyNa izany aza, rehefa afaka nanamarina i ArtsTechnica andro vitsy lasa izay, ny HarmonyOS dia tsy inona akory fa fork mifototra amin'ny Android 10, toy ny rafitry ny takelaka Fire's Amazon.
Antenaina fa handefa Android Android Huawei na dia nolavin'ny orinasa imbetsaka aza izy io, saingy io no fomba haingana indrindra hanohizana ireo fitaovana izay mifanaraka amin'ny ankamaroan'ireo izay misy ao amin'ny Play. aza mampiasa serivisy Google.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Etazonia dia manamafy fa hitohy ny Huawei raha tsy misy ny tolotra Google
Pink dia iray amin'ireo piozila tany am-boalohany indrindra, fialamboly ary mozika azonao lalaovina
Inona ny 'Screen Waterfall' an'ny Xiaomi Concept: ny firosoana amin'ny finday mandehandeha